CeleLove, Author at CeleLove - Page 59 of 62
Articles by CeleLove
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ ၂၀၂၀ မတ်လ မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံး ပျံ့နှံကူးစက်နိုင်…
January 28, 2020 CeleLove 0
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ ၂၀၂၀ မတ်လ မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံး ပျံ့နှံကူးစက်နိုင်… တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့က စတင်ခဲ့တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ နိုင်ငံ ၁၃ နိုင်ငံထိ ကူးစက်နေပါပြီ …။ တရုတ်မှာလည်း Update 28.1.2020 . 9:00am ရောဂါကူးစက် ၄၄၆၅ ဦး သံသယလူနာ […]
နိုင်ငံခြားသူပြောတဲ့ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အရာတွေအတွက် ဘာမှ ပြင်ဆင်မထားတဲ့ ရန်ကုန်လေဆိပ် မရှက်ကြဘူးလား… ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အရာတွေအတွက် မြန်မာ ဘာမှ မပြင်ဆင်ထားဘူး… “ကျွန်မ ဘန်ကောက်ကတဆင့် ချင်းမိုင်ကို သွားဖို့ အခု ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ ရောက်နေပါတယ်။ ကျွန်မ ပတ်စ်ပို့စ်ကို စစ်တဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးက ဝန်ထမ်းက ဘာအကာအကွယ်မှ မပါဘဲ […]
ရိုမန်တစ်ဆန်ဆန် စကားလုံးတွေကို သုံးပြီး သူမရဲ့ ချာတိတ်ကို မေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ မယ်လိုဒီ ပရိသတ်ကြီးရေ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီမယ်လိုဒီကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကိုပြန်လည်လုပ်ဆောင်နေပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကိုလည်းလက်ခံရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပါတယ် … ။ မယ်လိုဒီကတော့ သားလေးတစ်ယောက်ကိုမွေးဖွားထားပြီး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါနော် … ။ မယ်လိုဒီကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကိုပြန်လည်လုပ်ဆောင်နေချိန်မှာ သားလေးကိုအချိန်အများကြီးမပေးနိုင်ပေမယ့် သားလေးပျော်အောင်တော့ထားပေးနေတဲ့မိခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် … ။ […]
Corona Virus ရန်မှကာကွယ်ဖို့ လိုက်နာရမည့်အချက်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းကထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီ
Corona Virus ရန်မှကာကွယ်ဖို့ လိုက်နာရမည့်အချက်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းကထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီ ဝူဟန်မြို့က ကြောက်မက်ဖွယ် Corona ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းကို အလျင်အမြန်ပဲ ကူးစက်ပျံ့နှံ့လာခဲ့ပါပြီပဲဖြစ်ပါတယ် … ။ ဒီ Corona Virus ဟာ လူလူချင်းကူးစက်နိုင်သလို ကူးစက်နှုန်းမြန်ဆန်လှတာကြောင့် ထိန်းချုပ်ရခက်ခဲနေတာဖြစ်ပြီး လက်ရှိတရုတ်ပြည်မှာတော့ မြို့ကြီးဆယ်မြို့နဲ့အထက် ကို သတိပေးမှုအဆင့် […]
ဝူဟန်မှာ ပိတ်မိနေတဲ့ မြန်မာကျောင်းသားတစ်ဦး ရိုက်ကူးထားတဲ့ Video file
ဝူဟန်မှာ ပိတ်မိနေတဲ့ မြန်မာကျောင်းသားတစ်ဦး ရိုက်ကူးထားတဲ့ Video file ဝူဟန်မှာ ပိတ်မိနေတဲ့ မြန်မာကျောင်းသား အယောက်(၆၀)ကျော်အတွက်လည်း စိတ်ပူတယ် … ။ ဝူဟန်က လူတွေအားလုံးအတွက်လည်း စိတ်မကောင်းဘူး …. ။ သူတို့ ဘယ်လောက် ကြောက်ရွံ့နေရှာမလဲ … ။ သူတို့ ဘယ်လောက် […]
လူတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်တဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားချက် (၁၃)ချက်
လူတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်တဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားချက် (၁၃)ချက် (1) မနက်မိုးလင်းလို့ မျက်စိနှစ်လုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ သူ့မျက်နှာလေးကိုအရင်ဦးဆုံး မြင်ယောင်တတ်ယ်။ (2) ဖုန်း ringtone သံကြားတိုင်း၊ မက်ဆေ့ တစ်ခုဝင်တိုင်း သူများလားဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့ ဖုန်းကို ကမမ်းကတမ်း ဖွင့်ကြည့်တတ်တယ် ၊၊ (သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိလိုက်ရရင် စိတ်ထဲမှာ […]
ပါချုပ်ဆရာတော်ဟောကြားထားသည့် ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျလာနိုင်သည်ဟု နိမိတ်မကောင်းကြုံတဲ့အခါ ပြုလုပ်သင့်တဲ့ အချက်များ… ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျလာတဲ့အခါ ဘာနဲ့ကာကွယ်ရသလဲဆိုရင် ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျလာတဲ့အခါဖြစ်လာမယ့်အရိပ်အရောင် ရှိပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ ဘာနဲ့ကာကွယ်ရသလဲဆိုရင် ဘုရားကိုအာရုံပြုပြီး ဗုဒ္ဓါနုဿတိကိုပွားရမယ် …။ ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကို အာရုံပြု၊ ကမ္မဌာန်းထိုင်၊ ဂုဏ်တော်တွေကို နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီး အချိန်များများ …မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ရမယ် …။ လုပ်ပြီးတဲ့အခါကိုယ်လုပ်တဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုကို ကိုယ်မမြင်ရတဲ့ သတ္တဝါတွေ၊ […]
ဝူဟန် ဗိုင်းရပ်ပိုး လူနာတွေကို ဆေးကုသရင်းမှသေဆုံးသွားခဲ့သော ဆရာဝန် (ရုပ်သံ)
January 27, 2020 CeleLove 0
ဝူဟန် ဗိုင်းရပ်ပိုး လူနာတွေကို ဆေးကုသရင်းမှသေဆုံးသွားခဲ့သော ဆရာဝန် (ရုပ်သံ) တရုတ်ပြည်တွင် ဝူဟန် ဗိုင်းရပ်ပိုးလူနာတွေကို ဆေးကုသရင်းမှသေဆုံးသွားခဲ့သော ဆရာဝန်ရဲ့ စိတ်မကောင်းစရာ video ရုပ်သံထွက်ပေါ်လာပါတယ် …။ ဆရာဝန်မှာ လူနာကိုကုပေးရင်းရုတ်တရက်လဲကျသွားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ တရုတ်နိုင်ငံ ၀ူဟန်မြို့ကနေစတင်လာတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မှာ အတော်လေးကို ကြောက်စရာကောင်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် […]
သရုပ်ဆောင် ထက်အောင်ရှိုင်း ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် သံသယဖြစ်ဖွယ် လူနာအဖြစ် ကုသမှုခံယူ
သရုပ်ဆောင် ထက်အောင်ရှိုင်း ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် သံသယဖြစ်ဖွယ် လူနာအဖြစ် ကုသမှုခံယူ နိုင်ငံကျော်သရုပ်ဆောင်မင်းသားချော အောင်လေးကတော့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ မော်ဒယ်မင်းသားချော ထက်အောင်ရှိုင်းရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို စိတ်ပူနေရှာတဲ့အကြောင်းကို “အမြန်သက်သာပါစေညီလေးရေ. မထင်ထားဘူးဒီရောဂါကြီးမင်းထိပ်ဆုံးကဖြစ်လိမ့်မယ်လို့” လို့ သူရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ ထက်အောင်ရှိုင်းတစ်ယောက် ဆေးရုံမှာ အောက်စီဂျင်ပိုက်တန်းလန်းနဲ့ ဆေးကုသမှုခံယူနေရပုံကိုတင်ထားပါတယ် …။ အောင်လေးတစ်ယောက် […]
ဝူဟန် မြို့က ဈေးဆိုပဲ ကပ်ဆိုက်တာလည်းမပြောနဲ့ အကုသိုလ်ဈေးကြီး (ရုပ်သံ)
ဝူဟန် မြို့က ဈေးဆိုပဲ ကပ်ဆိုက်တာလည်းမပြောနဲ့ အကုသိုလ်ဈေးကြီး (ရုပ်သံ) ကမ္ဘာ့အကြင်နာစိတ် သနားစိတ် ကင်းမဲ့ဆုံးသော လူမျိုးတွေလို့ကို ပြောလို့ရပါတယ် …။ ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်လူမျိုးတွေကမှ စားခဲတဲ့ အကောင်ပေါင်းစုံ၊ အသားပေါင်းစုံကို အလုအယက်ဝယ်ယူပီး စားသောက်နေကြတာပါ …။ တော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ လူမျိုးတွေပါပဲ။ အငတ်ကြမ်းလွန်းပါတယ်ဗျာ။ ခွေးလေးတွေဆိုရင်လဲ သနားစရာ […]